Bada | Tyelela uHultsfred
Fumanisa elinye lamachibi ethu okudada!
Ngaba unqwenela ukudipha echibini? Kujikeleze umasipala wethu, zininzi iindawo ezintle zokuhlamba onokukhetha kuzo. Isanti phakathi kweenzwane okanye ingca ethambileyo - apha indawo yokudibanisa ayikude. Ukuba wena nabantwana nithanda ichibi elingaphakathi elinama-27-degree, ke iphuli yokubhukuda yangaphakathi kaHagadal kufanelekile ukutyelelwa!
Indlu yokuhlambela yaseVirserum
Indlu yokuhlambela yaseVirserum yindawo encinci yokuhlambela enephuli eshushu yokulinganisa i-12,5 x 6 yeemitha. Isiziba sinobunzulu ukusuka kwi-0,9 ukuya kwi-1,5 yeemitha.
Indawo kaHesjön yokuhlambela
Wamkelekile kwindawo yokuhlambela kaHesjön! Kukho indlu yangasese yangaphandle, ikhubazekile yangasese, igumbi lokutshintsha. Indawo ye-Barbecue, indawo yokuqubha eneejethi kunye nenqaba yokutsiba kunye nenkundla yevolleyball yaselwandle. Ukusuka kwindawo yokupaka kukho indlela enokwenziwa ngentando ezantsi
I-hulngahultsbadet yindawo yokuhlamba eSilverdalen Ukufikeleleka kunye namagumbi atshintshayo amagumbi okutshintshela inkundla yangasese
Indawo yokuhlamba kaLillesjön
Okuthandwa ziintsapho ezinabantwana. Indawo yokuhlambela inejethi, indawo yokosa inyama, indlu engaphandle, ukufikeleleka kunye nomtsalane Inkundla yeVolleyball Jetty WC Indawo yeBharbheyi
Ukubhukuda kukaHagadal kunye neholo lezemidlalo
Ukubhukuda kweHagadal kunye neholo lezemidlalo kubonelela ngokudada, ukuzivocavoca, ukuthambisa okanye ukuxhoma kunye nabahlobo kunye nekofu. Eli ziko lisondele kwindalo kunye neendlela ezintle zokuzilolonga.
Ipuli yokudada yindawo encinci yokuhlamba embindini weJärnforsen, malunga ne-150 m ukusuka kwisikhululo segesi. Indawo yokuhlambela inejeti. Le yindawo kamasipala yokuhlambela kwaye
IKaffeberget ikumbindi weVirserum esemazantsi. Indawo yokuhlamba ineenduli kunye nesanti nengca. Kukho iijethi ezimbini, amagumbi okutshintsha, ujingi kunye
Malunga neekhilomitha ezintandathu kumazantsi mpuma eVena le ndawo intle yokuhlamba inendawo ezintle eziluhlaza zokwenza imisebenzi. Kukwakho namagumbi okutshintsha, indawo yokutya inyama, indlu yangasese eyomileyo, ujingi kunye
Wamkelekile kuKristinebergsbadet, apha abantwana banokujikeleza kwinto yokudlala "Kalle kula". Indawo yokuhlambela edumileyo kunye neyindwendwelwe kakuhle phakathi kweentsapho ezinabantwana abancinci njengoko ingekho nzulu. Apha
Indawo yokuhlamba yeStora Hammarsjön
Indawo yokuhlamba edumileyo ebandakanyiweyo kwindawo engaphandle. Apha uhamba nabantwana abadala abanokudada. Eli chibi lakhawuleza laba nzulu kwaye lithatha ixesha
Indawo yokuhlamba yeLinden
Ukudada okuthandwayo, ukuloba kunye nechibi lokuhamba ngesikhephe. Indlela eya ebhafini ijikeleza indlela yayo. ILinden lichibi elibanda kancinci kwezinye iindawo kakhulu
Indawo yokuhlambela kaHulingen
Indawo yokuhlambela kaHulingen ibekwe eHultsfred, kwinxalenye esemantla yeHulingen. Ecaleni kwendawo yokuhlambela iCamp Hultsfred. Apha ungathenga ukungenisa okulula. Kwindawo ekhoyo